UBonang Matheba uyangikweleta - Kusho iMake-Up Artist | News24
UBonang Matheba uyangikweleta - Kusho iMake-Up Artist
eGoli - UMuzi Zuma osebenza njenge-Make-Up Artist yosaziwayo ukhala ngokuthi intokazi engumethuli wezinhlelo uBonang Matheba iyamukweleta.
UZuma uthi lo saziwayo umukweleta imali engango-R25 000.
Ekhuluma nabeSowetan ngoMsombuluko ngemuva kokubhala uhidi lwemilayezo enkundleni u-twitter, uZuma uthi lo saziwayo akasaziphenduli nezingcingo zakhe, amameyili ngisho nemilayezo yakhe useyayiziba.
"Angiyona le nhlobo yomuntu ongasukela omunye esidlangalaleni ngidicilele phansi igama lakhe, kodwa sengikhathele. Akakayikhokheli inkontileka esasinayo ngomsebenzi engawenza,"kusho uZuma.
OLUNYE UDABA: 'Angazi kungani abantu begudla iguma, amanyala amanyala nje kwaphela,' kusho usomahlaya
Lo mphaquli uthi wasebenza uMatheba ngesikhathi ethula uhlelo lokudla kuMzansi Magic olwaziwa nge-KFC Taste Kitchen, doing her make-up for the show.
"Lokhu kwenzeke ngoJulayi wangonyaka odlule, kodwa ngezwa kuthiwa iholo lakhe lalulo hlelo uzolithola ngomhlaka 30 Septhemba nokuthi ngizokhokhelwa ngaleso sikhathi. Ngalinda kusukela ngo-Okthoba kuze kube yimane, kanti manje useyangiziba akasaphenduli lotho okwami.
UDavid Phillips okunguMqondisi wenkampani iCSA okuyiyona ephethe le ntokazi uthe: "Isikhalazo sikaZuma thina kasisazi ngoba konke lokhu kwenzeka ngesikhathi uMatheba esaphethwe yinkampani yakhe yakudala.